I-China Imbali yezivelisi zeiglavu ezilahlwayo kunye nabathengisi | EMVA
1. Imbali ngemvelaphi yeiglavu ezilahlwayo
Ngomnyaka we-1889, izibini zokuqala zeglavu ezilahlayo zazalwa kwiklinikhi kaGqr.
Kwinkqubo yotyando, iiglavu ezilahlwayo azinakuqinisekisa nje kuphela ubhetyebhetye besandla sikagqirha, kodwa zikwanyusa kakhulu impilo yezempilo. Iiglavu ezilahlwayo kugqirha kweli qela zithandwa kakhulu.
Kuvavanyo lweklinikhi lwexesha elide, kwafunyanwa iiglavu ezilahlwayo zinomsebenzi wokwahlula izifo ezithwalwa ligazi, kwaye i-Occupational Health and Safety Administration ibandakanya izixhobo zokhuselo xa kuqhambuke uGawulayo ngo-1992.
Iiglavu ezilahlwayo ezelwe kwishishini lonyango, inzalo yeiglavu zonyango nazo ziqinile, iindlela eziqhelekileyo zokucoca zezi zilandelayo:
1) inzalo ye-Ethylene oxide -ukusetyenziswa kwenzalo yezonyango ye-ethylene oxide technology inzala inokubulala zonke iintsholongwane, kubandakanya ne-bacterial spores, kodwa kunye nokuqinisekisa ukuba iigloves azonakalisi;
2) Ukucocwa kwe-Gamma-ray - inzalo kukusetyenziswa kwemitha ye-electromagnetic eyenziwe ngamaza ombane ukubulala uninzi lwezinto kwiintsholongwane. Yindlela esebenzayo yokuthintela okanye yokubulala ii-microorganisms ukufezekisa inqanaba eliphezulu lokucoca inzalo, emva kokuba i-gamma-ray icime iigloves zeBacteria ngokubanzi zingwevu.
3. Ukwahlulahlula iiglavu ezilahlwayo
Njengengxenye yabemi abanokungabikho komzimba kwendalo, abavelisi beiglavu bahlala benika izisombululo ezahlukeneyo, ezivela kwiiglavu ezahlukeneyo ezilahlwayo.
Ngokwemathiriyeli eyahlukeneyo, iiglavu ezilahlwayo zingahlulwa-hlulwa zibe ziiglavu zelitye, iiglavu zelatex, iiglavu zePVC, iiglavu ze-PE ... ...
Ekugqibeleni, i-ORIENTMED inokubonelela ngeigloves ezahlukeneyo, ngokusekwe kwixabiso lokhuphiswano. Ngezempilo, inkonzo yobungcali siya kwenza ngcono!
Ixesha Post: Sep-29-2020